Ukunikezwa okusha kukhombisa ukwakheka kwesikhathi esizayo kwe-iPhone 14 Pro | iPhone News
Ukunikezwa okusha kukhombisa ukwakheka kwesikhathi esizayo kwe-iPhone 14 Pro
U-Angel Gonzalez | 27/05/2022 17:00 | Kubuyekezwe ku- 28/05/2022 12:30 | iPhone 14
I-Los amahlebezi nokuvuza mayelana ne-iPhone 14 Pro ziyaqhubeka, ikakhulukazi uma kubhekwa ukuthi i-Apple ifuna ukukuphusha ngempela lokho ngoba. Sekuphele izinyanga sazi ukuthi lezi zisetshenziswa ezintsha ezizokhishwa ngoSepthemba walo nyaka zizoletha izinguquko ezibalulekile ezingeni lokuklama. Kodwa hhayi bonke. I-Apple ifuna ukuthuthukisa izinguquko ikakhulukazi kumodeli ye-Pro, ishiya eceleni amamodeli ajwayelekile, isuse, ngenhlanhla, imodeli encane. Lezi ukunikezwa okusha kukhombisa wonke amahlebezi mayelana ne-iPhone 14 Pro, enomklamo oyindingilizi kakhudlwana, isistimu entsha yekhamera yangemuva kanye nengaphambili elinomklamo 'wephilisi'.
1 Izinguquko zedizayini ezibaluleke kakhulu ku-iPhone 14 Pro
2 Imibala emisha namandla amakhulu ngemuva
Izinguquko zedizayini ezibaluleke kakhulu ku-iPhone 14 Pro
I-iPhone 14 izongena ezimpilweni zethu ngoSepthemba walo nyaka. I-Apple izokwenza inothi eyisihluthulelo entsha lapho izokwethula lonke uhla oluvuselelwe lwe-smartphone yayo futhi sizonikeza isizukulwane seshumi nane indawo. Kunamahemuhemu amaningi ngalo mshini futhi njengoba izinyanga zihamba aya ngokuya ehlala njalo futhi ecacile.
Kulesi senzakalo uJon Prosser kanye U-Ian Zelbo Baye emsebenzini ukuze bahlanganise wonke amahlebezi ekuhumusheni abefana ngangokunokwenzeka nalokho okulindeleke ukuba kube i-iPhone 14 Pro. Bagxile kumodeli ye-Pro ngoba, njengoba bengisho. I-Apple ihlose ukwenza igxathu elikhulu kumodeli ye-Pro, ishiye imodeli ejwayelekile efana ne-iPhone 13 yamanje ezingeni lokuklama.
Imibala emisha namandla amakhulu ngemuva
Into yokuqala okufanele idonse ukunaka kwethu ingaphambili ledivayisi: sivalelisa ku-notch ukuze senze indlela yesistimu yokujula kweqiniso eyindilinga ngendlela 'yephilisi'. Iphinde ikhulume ngokuqondile ukunciphisa i-bevel. Lokhu, kanye noshintsho lwenothi, kuvumela ukwandisa kancane isikrini futhi ukhiqize umuzwa wokugcwala ngokungafani nezizukulwane ezedlule.
Enye ingxenye eshayayo itholakala ngemuva. Uhlelo olusha lwekhamera yangemuva luhlose ukuthatha isinyathelo esikhulu ku-iPhone 14 Pro. Sizoba nayo isistimu yekhamera enkulu enenzwa engu-48-megapixel ngaphezu kokuthi inkulu ngo-57% kune-iPhone 13 Pro. Lolu hlelo luzovumela ukurekhoda ngo-8K. Nokho, iqiniso lokwandisa ubukhulu bepuleti lapho amakhamera akhona lisho lokho I-Apple kungase kudingeke ukuthi isuse ama-bezel ngemuva ukugwema ukungahambisani okubonakalayo. Sihlaziye le nkinga ku lokhu Isihloko:
Ekugcineni, ezingeni lokunikeza, a Imodeli ensomi ye-iPhone 14 Pro. Ngokusobala i-Apple izocabanga ukwenza inguqulo elinganiselwe yalo mbala ngaphezu kwemibala ye-graphite, isiliva negolide esesiyazi kusukela kwezinye izizukulwane.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 14 » Ukunikezwa okusha kukhombisa ukwakheka kwesikhathi esizayo kwe-iPhone 14 Pro
I-Apple ithatha indawo ye-iTunes Pass ngekhadi le-akhawunti ye-Apple ku-iOS 15.5
Ekugcineni!: I-Apple Music ihlanganiswe njengomdlali ku-Waze